COVID-19: 'Dhukkubsattoota Kooviid-19 keessaa %35 kan ta'an mallattoolee hin agarsiisan'
1 year, 12 months ago 1168 Qoodi
Wirtuu To'annoo fi Ittisa Dhibeewwan Ameerikaa (American CDC) beektoota herreega fi ogeeyyii fayyaa hawaasaaf qajeelfama haaraa qopheesseera. Qajeelfamichi namoota vaayirasii koronaan qabaman keessa dhibbeentaa 35 (35%) kan ta'an mallattoolee kan hin agarsiisne (asymptomatic) akka ta'an tilmaameera.
Tilmaama dhiyaateen akka ibsametti, dhukkubsattoota mallattoo agarsiisan keessaa %0.4 kan ta'an ni du'u. Dhukkubsattoota umurii 65 fi sanaa ol qaban keessaa %1.3 akkasumas kanneen umurii 49 fi gadi ta'an keessaa ammoo %0.05 kan ta'an lubbuu isaani dhabu.
Dabalataan tilmaamni kun dhukkubsattoota mallattoo agarsiisan keessaa %3.4 kan ta'an hospitaalatti yaalamu akka qaban eereera. Kun dhibbeentaan yeroo ibsamu dhukkubsattoota umurii 65 fi sanaa ol ta'aniif gara %7.4 ol guddata.
Akka tilmaama wirtuu kanaan tatamsa'ina vaayirasicha keessa harka 40 (40%) nama irraa gara namatti kan darbu, namni dursa qabame osoo wal'aansa yaalaa hin argatiniidha.
Dhaabbatichi yaadota tilmaama shan (scenario) kan kaa'ee qophii karooraaf gargaarsa akka ta'aniif qofa kan qophaa'e fi odeeffannoolee lakkoofsa haala vaayirasichan waliin jijjiiramu danda'u jedheera.
COVID19 ACDC Ameerikaa
Oct. 2, 2020, 5:38 a.m.
ODUU AMMEE: Pireezidaanti Ameerikaa Donaald Tiraamp fi haatii warraa isaani Covid-19n qabaman
May 20, 2020, 7:58 a.m.
COVID-19: Tiraamp jibba Chaayinaan Afriikaaf qabdu WHOn callisee ilaale jechuun komatan
May 14, 2020, 6:36 p.m.
COVID-19: Ameerikaatti namoonni miiliyoona 36.5 sababa vaayirasii koronaa hojii dhaban